Cusboonaysiinta Federaalka & Gobolka Marijuana & Hemp - Cannabis Legalization News
Sharci Sharciyeedka Xashiishka - Arbacooyinka @ 2:00 pm CST
Haddii aad raadineyso halka aad ka heli karto Sharciyeynta Cannabis - Waxaad timid meeshii saxda ahayd!
Markii ay ahayd shaqaale u shaqeeya awood sare, taariikhda iyo waxa adduunka oo dhan ku habboon, qareenka bilaabay boggan wuxuu dhigayaa sannadihii uu soo maray sharciga ganacsiga khibraddiisa inuu ka shaqeeyo sidii looga caawin lahaa saxida khaladaadka taariikhda marka ay timaaddo dambiile ka ganacsiga xashiishadda.
Wuxuu bilaabay kanaalka YouTube, Cannabis Legalization News, 2018, oo ay weheliso websaydhkan iyo ku dhaqankiisa sharciga ah. Markaa bilooyinkii ugu horreeyayba way roon yihiin - laakiin hadda macaamiisha iyo dhagaystayaashaba, si dhakhso leh ayey u korayaan - laga yaabee inay ku siiso wax aad ku sugi karto toddobaad kasta.
Arbaco walba saacadu markay tahay 2:00 pm Waqtiga Dhexe, Qareenka Cannabis, Tom, iyo wariye WeedNews.Co, Soogalootiga, isu imow si aad uga wada hadashaan usbuuca Sharciyeynta Cannabis. Waxay soo dhoweynayaan xubnaha sharci dajinta cannabis si ay ugala hadlaan ganacsigooda iyo isbeddelada sharci dejinta ee loo baahan yahay si loo xaliyo tobanaan sano oo siyaasad xumo ah. Aynu si dheeraad ah uga wada hadalno - laakiin marka hore…
La xidhiidh Qareennada Cannabis
Wararkii ugu Dambeeyay ee Legalization News
Toddobaad kasta, waxaan dib u qiimeyneynaa wixii hoos ugu dhacay taariikhda soo afjaridda mamnuucidda xashiishadda ee sababay waxyeelo ka badan tii wanaagsanayd 80-kii sano ee la soo dhaafay.
Waa quudin toos ah Arbaco kasta saacaddu markay tahay 2:00 galabnimo - waqtiga dhexe. Daawado si toos ah una weydii su'aalahaaga ama codkaaga ka jawaab. Kaliya maahan inay toos uga baxdo YouTube-ka, laakiin sidoo kale Facebook. Marka waa tan sida aad si fudud ugu qabsan karto:
Halkan ku qor
Ama Naga Like on Facebook oo u fiirso halka ay ku nooshahay:
Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto nooca PodCast:
Taasi waa macno ahaan waxa aad u baahan tahay oo dhan inaad u sameyso si aad u daawato sharcinimada u dhacdo isbuuc kasta. Waxaad fursad u heshay inaad markhaati ka noqoto taariikhda - oo aad xitaa kaacaawiso adiga oo ka qayb qaadanaya isbadalka sharci dejinta laf ahaantaada. Laakiin maxaad ku sugi kartaa inaad iska sii sugto diiwaangelintaada - taas oo ah lacag la’aan guud ahaan - oo loogu talo galay Wararka Sharciyeynta Cannabis?
Sharciga Sharci dejinta Federalka ee 2019 XNUMX
Marka lagu daro quudinta wararka toddobaadlaha ah, qareenkeenna cannabis ayaa si joogto ah u sameeya YouTubes dhabta ah ee ku saabsan sharciyada iyo xashiishadda cannabis. Gaar ahaan heerka federaalka.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabihii uu qabtay:
Sharciga Cadaaladda ee Marijuana ee 2019
420 News sida muuqata waxaa la baarayaa in ka badan 200 jeer bishii - haddii aad muddadaas raadineysay oo aad ku dhammaatay halkan - soo dhawow, ku farax inaan kugu haysto.
Shaqadeena halkan waa inaan hubino inaad heshay 420 -kaaga - waxaan u aragnaa in warkani yahay mid 'ka fufan' wararka dhabta ah iyo falanqaynta markay tahay bedelida sharciyada xashiishadda Mareykanka iyo adduunka.
420 news waxaa loola jeedaa dhinaca xiisaha badan ee wararka xashiishadda. Mararka qaarkood waxaan ka wada hadalnaa sida ay xeerarku u noqon karaan wax lagu farxo. Dukaan lagu farsameeyo xashiishadda cannabis oo labadaba koray oo u adeegta dadweynaha.
Tartanka cannabis ee halkaa ka jira ayaa magacaabaya nooca dhibta ugu fiican.
Walxaha qabow, laakiin aan muhiim u ahayn waxa socda ee gacan ka geysanaya in la beddelo sharci dad badan ku waxyeeloobey, laakiin aan midna badbaadin. Taasi waa 420 News.
Waa wax weyn in la heysto maxaa yeelay waxay muujineysaa dhinaca qalbiga ee waxa aan iskudayeynay inaan qabanno, laakiin waxyaabaha ugu badan ee aan ka koobnaano waxay noqon doonaan bedelida sharciga iyo ganacsiyaadka ka baxaya warshadaha xashiishadda iyo sida ay sameynayaan ay horumarinayaan nolosha iyo sharciga oo dhan. Ameerika, iyo xitaa adduunka.
Kusoo Bandhig Warar Kordhinta Cannabis
Haddii aad ka tirsan tahay wershadaha cannabis - waan jeclaan lahayn inaan kula hadalno. Aynu wada hadalno. Iga soo raac Linked'in
Ama isticmaal mid ka mid ah xiriidhada badan ee badhanka bogga ama bogga wicitaanka si aad ula xiriirto - waxaana laga yaabaa inaan adiga kaa dhigno -
Haddii aad jeceshahay muuqaalkan, ama aad garato qof u arka wax xiiso leh - fadlan ka fiirso wadaagista.